Vaovao - Mitohy ny fanarenana tsena vy
Mitohy ny fanarenana tsena vy, ao anatin'ny tolona manerantany
Ny areti-mifindra coronavirus dia nahatonga ny tsenan'ny vy sy ny toekarena erak'izao tontolo izao, nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 2020. Ny toekaren'i Shina no voalohany nijaly noho ny fanidiana nateraky ny Covid-19. Niroborobo ny famokarana indostrialy tao amin'ny volana febintaona tamin'ity taona ity. Na izany aza, ny fanarenana haingana dia voarakitra hatramin'ny volana aprily.
Ny fanidiana ny orinasam-pamokarana, tany Shina, dia niteraka olana teo amin'ny kaontinanta rehetra, manerana ireo sehatra mihinana vy maro. Tsy misy hafa noho ny ao amin'ny indostrian'ny fiara, izay efa niady mafy hiatrehana ireo kaody fanandramana vaovao sy ny firosoana amin'ireo fiara maitso, mahomby kokoa.
Ny famoahana ireo mpamokatra fiara manerantany dia mijanona eo ambanin'ny ambaratongam-piraisana mialoha ny aretina, na eo aza ny fanalefahana ny fameperana apetraky ny governemanta amin'ny firenena maro. Ny fangatahana amin'ity sehatra ity dia zava-dehibe amin'ny mpamokatra vy maro.
Ny fifohazana eo amin'ny tsenan-by, any Sina, dia mitohy mihaona hatrany, na eo aza ny vanim-potoana orana. Ny hafainganam-pandehan'ny fanarenana dia afaka manome lohany ny orinasa sinoa rehefa miverina eny an-tsena ny mpanjifa manerantany, aorian'ny volana maro nijanonany tao an-trano. Na izany aza, ny fitomboan'ny fangatahana ao an-trano, any Chine, dia mety hisitraka be dia be ny vokatra avo lenta.
Vaky ny vy amin'ny vy US $ 100 / t
Ny fiakaran'ny vokatra vy sinoa, tato ho ato, dia nanampy tamin'ny fandaniana ny vy tamin'ny vy mihoatra ny 100 $ ny taonina. Izy io dia manome tsindry ratsy amin'ny sisin-tombon'ny fikosoham-bary ivelan'i Shina, izay ijanonan'ny fangatahana ary marefo ny vidin'ny vy. Na eo aza izany, ny fiakaran'ny vidim-pidirana dia afaka manome tosika ny mpamokatra hanosika ny fiakaran'ny vidin'ny vy tena ilaina amin'ny volana ho avy.
Ny fanarenana amin'ny tsena sinoa dia mety hampiharihary ny lalana hivoahan'ny fidinan'ny coronavirus amin'ny sehatry ny vy manerantany. Ny ambin'izao tontolo izao dia ao ambadiky ny fiolahana. Na dia toa somary miadana aza ny fifohazam-panahy any amin'ny firenen-kafa, dia misy famantarana tsara azo avy amin'ny fiakarana any Shina.
Ny vidin'ny vy dia mety hijanona hatrany, amin'ny tapany faharoa amin'ny 2020, satria ny lalana mankany amin'ny fanarenana dia antenaina fa tsy hitovy. Ny toe-javatra eo amin'ny tsena manerantany dia mety hiharatsy alohan'ny hitomboany tsara. Naharitra taona maro vao namerina ny ankamaroan'ny tany very ny sehatry ny vy, taorian'ny krizy ara-bola tamin'ny 2008/9.